ကျွန်ုပ်တို့၏ကြက်ဘဲအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ကျယ်ပြန့်သောအကျယ်အ ၀ န်းရှိသည်။ ပြောင်းကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ပြောင်း, မြက်ပင်, ဘောဇဉ်, SBM, MBM, ကျောက်စိမ်း, သကာရည်, ကောက်ရိုး, နှင့်အခြားကုန်ကြမ်းအချို့.
အစာကျွေးပြီးပြည့်သည့်အစာလုံးတိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းပါဝင်သည်, ကြိတ်ဆုံ, အသုတ်နှင့်ရောစပ်, pelletizing,အအေး,ပြိုကျ ,လုံးလေးများစိစစ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုး. အပြည့်အဝလိုင်း crusher ပါရှိသည်, ရောနှော, လုံးလေးများ, အေး,တကယ,အေးနှင့်အားလုံး bins, ပန်းချီဆရာ,စက်ပေါ်ကိုစက်ထုပ်ပိုးစသည်တို့
ကြက်ဘဲအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းလျှောက်လွှာ: အကြီးစားအစာကျွေးစက်စက်ရုံများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည် / အစာကျွေးစက်ရုံ / စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံ; မြင့်မားသောအထွက်နှုန်းနှင့်အလိုအလျောက်အစာကျွေးခြင်းထုတ်လုပ်မှုများအတွက်စံပြအစာကျွေးခြင်းကြိတ်ခွဲစက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း.
တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံတည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ခြင်း?ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကြက်ဘဲအစာစက်ရုံထုတ်လုပ်မှုလိုင်းထုတ်လုပ်သူသည်သင်လိုချင်သောအတိအကျကိုပေးနိုင်သောနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများပါ ၀ င်သည်! ဒီမှာ, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များများအတွက်တိကျသောတိရိစ္ဆာန်အစာကျွေးခြင်းစက်ရုံရနိုင်သည်, တိရစ္ဆာန်များအစာကျွေးတောင့်အပါအဝငျ,ကြက်ဘဲအစာတောင့်,သိုးတောင့်ကိုကျွေးမွေး၏,ဝက်အစာကျွေးလုံးလေးများ,ဘဲအစာကျွေးတောင့်တင်း,ယုန်အစာကျွေးလုံးလေးများ, နောက် ... ပြီးတော့.
1.ကျွန်ုပ်တို့၏ကြက်ဘဲအစာထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည်ကျယ်ပြန့်သောအကျယ်အ ၀ န်းရှိသည်။ ပြောင်းကဲ့သို့သောအမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်, ပြောင်း, မြက်ပင်, ဘောဇဉ်, SBM, MBM, ကျောက်စိမ်း, သကာရည်, ကောက်ရိုး, နှင့်အခြားကုန်ကြမ်းအချို့.
2.ပြီးပြည့်စုံသောအစာတောင့်လုပ်ငန်းစဉ်တိရစ္ဆာန်တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်, ကြိတ်ဆုံ, အသုတ်နှင့်ရောစပ်, pelletizing,အအေး,ပြိုကျ ,လုံးလေးများစိစစ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုး. ပြည့်သည် ကြက်အစာကျွေးစက်ရုံ crusher ပါရှိသည်, ရောနှော, လုံးလေးများ, အေး,တကယ,အေးနှင့်အားလုံး bins, ပန်းချီဆရာ,ထုပ်ပိုးစက်စက်များအစရှိသဖြင့်ကုန်ကြမ်းများနှင့်တိကျသောလိုအပ်ချက်အရအစာကျွေးသည့်အပင်လုံးလေး၏စီးဆင်းမှုဇယားကိုအပြည့်အဝဒီဇိုင်းထုတ်သည်.
3.အရည်အသွေးကောင်းပြီးအစာကျွေးခြင်းတောင့်တင်းသံမဏိအေးစက်သည်အေးစက်။ ချက်ပြုတ်သည့်အချိန်ကိုတိုးချဲ့သည်. axial ရေနွေးငွေ့ဖြန်းဆိပ်ကမ်းကို, အစာကျွေးချက်ပြုတ်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်.
4.တိရိစ္ဆာန်အစာတောင့်စက်တွင်မြင့်မားသောအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုနိုင်သည့်အစာစက်များရှိသည်။ တိကျသောမောင်းနှင်သောအဓိကဂီယာနှင့်ပင်မရိုးသည်ကာဗွန်နိတ်ရှူခြင်းနှင့်ခက်ခဲသောသွားမျက်နှာပြင်ကြိတ်ခြင်းနည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။, ချောချောမွေ့မွေ့မောင်းနှင်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, ဆူညံသံနှင့်တာရှည်ခံသက်တမ်း.
5.စိတ်ကြိုက်စွမ်းရည်: ကွဲပြားခြားနားသောစွမ်းရည်များကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည် 1 တစ်နာရီကိုတစ်တန် 50 တစ်နာရီလျှင်တစ်တန်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသော.
6.အစာအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားကျွန်ုပ်တို့သည် mash အစာထုတ်လုပ်ခြင်း၏ဖြေရှင်းနည်းကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်, တောင့်အစာကျွေး, သင်တို့အဘို့အ crumble feed ကို. အတောင့်အစာကျွေးမှုသည် ၁.၅ မီလီမီတာမှ ၁၈ မီလီမီတာအထိရှိသည်.
ဒီအစာတောင့်စက်ရုံ၏ကြက်အစာကျွေးခြင်း pelleting ဖြစ်စဉ်ကို
ကြိတ်ခွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် - Hammer ကြိတ်စက်
●တူကြိတ်အစာကျွေးစက် အကောင်းဆုံး pelletizing အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားနှင့်အတူကုန်ကြမ်းအမှုန့်သို့ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ရန်သင့်လျော်သည်.
ရောစပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်: Feed Mixer
Pelletizing လုပ်ငန်းစဉ်: အူတိုင်ကြိတ်စက်၊
●အစာတောင့်ကြိတ်စက်သည်အဟာရထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်း၏အဓိကကိရိယာဖြစ်သည်. ပြားချပ်ချပ်သေကျွေးသောအစာတောင့်ကြိတ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်, ring ring အစာကျွေးသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများသည်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကြီးမားသည်.
●အအေးခံခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လုံးအတောင့်မှကြိတ်စက်များသည် ၈၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်နှင့်အထက်ထွက်နိုင်သည် 17-18% အစိုဓာတ်. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စိုထိုင်းသောအပူချိန်ကိုအစိုဓာတ်ကိုထိန်းညှိရန်လျင်မြန်စွာလျှော့ချရမည် 10-12% သင့်လျော်သောသိုလှောင်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်မှုအတွက်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်း. လုံးလေးများထို့ကြောင့်အအေးနှင့်အခြောက်ရမည်ဖြစ်သည်. ငါတို့ လုံးလေးများအအေးစက် တန်ပြန်စီးဆင်းမှုအအေးနိယာမချမှတ်, လုံးလေးများအပြည့်အဝနှင့်အညီအမျှအအေး. အအေးခံပြီးနောက်အတောင့်များ၏အပူချိန်သည်အခန်းအပူချိန်ထက်မပိုပါ +3-5 ဒီဂရီ.
●အအေးခံပြီးနောက်,လုံးလေးများကိုသင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်လိုအပ်ချက်အရအိတ်သို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်။ ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Semi-Auto Packing Machine မှထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်သည်။,ထို့နောက်အိတ်ထဲသို့အဆက်မပြတ်ထုတ်ပစ်ပါ။ ချိန်ညှိထားသောအိတ်များသည်သိုလှောင်ရန်ခြောက်သွေ့သောအစာများကိုသိုလှောင်ရန်အိတ်များ၏အထွfor်အထိပ်များကိုအပ်ချုပ်ရန်အတွက်စက်များရရှိနိုင်သည့်သယ်ဆောင်စက်တစ်လျှောက်ဖြတ်သွားပါမည်။.
●အထက်ပါဖြစ်စဉ်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်လိမ့်မည်. ထိန်းချုပ်မှုစင်တာကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်များအတွက်လက်ရှိ settings ကိုအညီစုဆောင်းနေသည်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တောင့်အပင်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုအပြည့်အဝကစားနိုင်ရန်နှင့်ပလပ်ဂင်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုလုံး၏တည်ငြိမ်မှုကိုသေချာစေသည်.
အထက်ပါ feed ကို pelleting ဖြစ်စဉ်ကိုပြီးနောက်, သငျသညျကြွယ်ဝသောအစာအာဟာရနှင့်အတူအစာကျွေးတောင့်ကိုရနိုင်သည်, ကောင်းသောအာဟာရနှင့်မြင့်မားသောအစာချေ. ကြက်သားအစာတောင့်အအေးနှင့်ထုပ်ပိုးစက်ကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သောထိပ်တန်းအစာတောင့်ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်စေရန်သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်. ထို့အပြင်, ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက်ဖြည့်တင်းရန်, အမျိုးမျိုးသောကြက်၊ ဘဲအစာတောင့်များထုတ်လုပ်မှုလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည်,ငါတို့သည် 1-2t / h နှင့်အတူကြက်ဘဲအစာတောင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပူဇော်နိုင်ပါတယ်,2-3t / h,3-5t / h,6-8t / h,နှင့် 8-10t / h,သို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်အတိုင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ.
3~5တန်ချိန် / တစ် pellet ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကျွေးမွေး (ဗစ်တာအမှတ်တံဆိပ်)
ပစ္စည်း မော်ဒယ် ဓာတ်ပုံ ပါဝါ
(kw) ရေတွက် မှတ်ချက်
Pulse ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း TBLMF.6 / 1 မြင့်မားသောထိရောက်မှုဖုန်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများ,-3mm / Q235 ပန်းကန်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်, အနားကွပ် 5mm / Q235 ပစ္စည်း
မိုးခေါင်ရေရှားပန်ကာ 4-72အဘယ်သူမျှမ 3.2A 1.5 1 GB တန်း, လှုံ့ဆျောပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာစမ်းသပ်မှု
Hopper နှင့်ဆန်ခါမျက်နှာပြင် 1× 1 / / 1 -2mm / Q235 စာရွက်စက်ရုံဖြင့်ပြုလုပ်သည်
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 / 13 1.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, အလယ်ပိုင်းပိုက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 1.8, ပန်းကန်နှင့်ချွတ်6အလွှာ.
Tubular သံလိုက် TXCT15 / 1 သံဖယ်ရှားမှုနှုန်း≥98%
သိုလှောင်ရုံ 500ကီလိုဂရမ် / / 1 ကုန်ကြမ်းသိုလှောင်ရန်
အလိုအလျောက်လမ်းခွဲ LSS20 1.5 1 ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှု,ယူနီဖောင်းအစာကျွေး
ကြိတ်စက် 56× 40 37 1 သံမဏိပြားပြုလုပ်ခြင်း ,မြင့်မားသောထိရောက်မှု
Pulse ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း TBLMF.9 / 1 မြင့်မားသောထိရောက်မှုဖုန်ဖယ်ရှားရေးပစ္စည်းကိရိယာများ,-3mm / Q235 ပန်းကန်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်, အနားကွပ် 5mm / Q235 ပစ္စည်း
မိုးခေါင်ရေရှားပန်ကာ 4-72အဘယ်သူမျှမ 3.6A31 GB တန်း, လှုံ့ဆျောပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာစမ်းသပ်မှု
လေထီးဥမင်လိုဏ်ခေါင်း / / / 1 စတီးပန်းကန်ပြား
ဝက်အူပေါ်ကို LSS25 2.2 1 ကြိတ်ခွဲစက်များအတွက်အထူးဒီဇိုင်း
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG36 / 23 2.2 16အစင်း၏အလွှာ
ဆက်စပ်ပစ္စည်းအစာကျွေး Hopper / / / 1 စတီးပန်းကန်ပြား
သိုလှောင်ရုံ 1000ကီလိုဂရမ် / / 1 ပစ္စည်းများသိုလှောင် Ror
တံခါးဝအဆို့ရှင် 42× 42 / 1 ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်းအလိုအလျောက်ဥတုနှင့်ပိတ်ဘို့အသုံးပြုခဲ့သည်.
အရောအနှော HJJ100 18.5 1 ထက်နည်းသောညနေခင်း CV 5%
ဝက်အူပေါ်ကို LSS25 2.2 1 ရောနှောပစ်ရန်အထူးဒီဇိုင်း
သုံး – လမ်း TBDQ2 × 25 × 25 / 1 သံလိုက် switch ကိုနှင့်အတူပူးတွဲသံလိုက်အဆို့ရှင်
အမှုန့်သိုလှောင်ဘင် 1000ကီလိုဂရမ် / / 1 /
သိုလှောင်ရုံ 1000ကီလိုဂရမ် / / 1 pelleting အဘို့အဆင်သင့်
လုံးတောင့်စက် SZLH 32C 37+2.2+0.75 1 အဓိက motor ကိုကာကွယ်ရန် overload protection device ကိုလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ အစိတ်အပိုင်းများကိုကျွေးသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများသည်အလွှာရှိရေနွေးငွေ့အအေးပေးစက်နှင့်မြန်နှုန်းကိုထိန်းညှိနိုင်ရန်အတွက် motor ကိုထိန်းညှိပေးသည်။, အဆိုပါတောင့်အရည်အသွေးပိုကောင်းလာပြီ
ရေပုံးဓာတ်လှေကား DTG26 / 23 1.5 1 ဦး ခေါင်းနှင့်အောက်ခြေ .03.0, အလယ်ပိုင်းပိုက်မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 1.8, ပန်းကန်နှင့်ချွတ်6အလွှာ.
အအေး SKLN 2.0 0.75× ၂ 1 စာနယ်ဇင်းလုံးလေးများအအေးသည်
ဇော်ပိုင် / / / 1 /
ဆိုင်ကလုန်းနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း / / / 1 /
လေဝင်လေထွက် GFZ.4 0.75× ၂ 1 /
မိုးခေါင်ရေရှားပန်ကာ 4-72No5A 7.5 1 GB တန်း, လှုံ့ဆျောပြောင်းလဲနေသောချိန်ခွင်လျှာစမ်းသပ်မှု.
လုံးလေးများကြိတ်ခွဲစက် SSLG15 × 80 5.5 1 အရည်အချင်းမရှိသောလုံးလေးများကြိတ်ခြင်း
Rotary siever SFJZ80 ×22.2 1 အမျိုးအစားခါးပတ် drive အသစ်နှင့်ဆီချောဆီကိုမလိုအပ်ပါ.
လုံးလေးများသိုလှောင်မှုဘင် 1000ကီလိုဂရမ် / /2ထုပ်ပိုးရန်အဆင်သင့်
အလိုအလျောက်အထုပ်စက် / / 1 ၂၅ ~ ၅၀ ကီလိုဂရမ် / အိတ် ၄၀၀ မှ ၈၀၀ အိတ်၊
/ ပါဝါဖြန့်ဖြူး / / / Beand :DELIXI
/ အရန်ပစ္စည်းများ / / / /
/ လျှပ်စစ်ကြိုး / / / /
/ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုး / / / /
/ လေဖိအား / / / /
/ ဆေးသုတ်သည် / / / /
/ အဆုတ်အစိတ်အပိုင်းများ / / / /
/ စံအစိတ်အပိုင်းများ / / / /
/ တူ / /5/
/ Frame / / 1 ကော်လံအချင်းဖြစ်ပါတယ် 75 ဂဟေပိုက်, 12# ရုပ်သံလိုင်းသံမဏိ, 5# ထောင့်သံမဏိ, ပြား -2mm / Q235, မြေပြန့်သည်4ပိုက်ပိုက်ဂဟေ.